Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndakarambana nemurume | Kwayedza
Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndakarambana nemurume
18 Dec, 2014 - 08:12	 2014-12-18T08:40:58+00:00 2014-12-18T08:40:58+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 38 nevana vaviri, ndozviitira mabasa emawoko uye ndinotsvakawo mudzimai ane makore 23-38. Anosevenza muHurumende, anotya Mwari anoda zvemba. Fonai pa0777 821 290.
Ndiri mukomana ane makore 24, ndinogara kuSouth Africa uye ndiri kutsvagawo musikana anotya Mwari ane makore 18-21 ari pachokwadi. Ari kuda zvemba anoda ngaandibate pa+27 620 793 661.
Ndiri murume ane makore 35 ndiri kutsvagawo shamwarisikana. Nhamba dzangu idzo 0733 340 479.
Ndine makore 25, HIV negative uye ndinodawo mukadzi ane makore 18 kusvika 24 chero ane mwana mumwe anoshanda muHarare. Nhamba dzangu 0779 672 056.
Ndinonzi George, ndiri kwaMutare uye ndine makore 22 ndinotsvagawo musikana ane makore 21 kusvika 19 ari pachokwadi. Nhamba dzangu 0771 087 431.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 21. Anondida anondibata pa0778 383 086.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 33 zvichidzika. Andifarira ndibatei pa0777 299 700.
Ndine makore 40 nemwana 1, ndiri muzvinhabhizimusi uye ndinotsvaka mukadzi ane makore 25 — 35 ane mwana 1 kana 2. Anoda kuwanikwa anoziva Mwari ngaandifonere pa0717 467 483.
Ini ndiri murume ane makore 32 ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 22 kusvika 28 anodawo zvemba ari HIV positive. Anoda nhamba dzangu 0737 809 454 asi vanoda kutamba ndiregeiwo ndapota hangu.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvakawo mudzimai anotya Mwari akavimbika anoda zvemba. Anofanirwa kuva anoshanda basa riri naniwo, nhamba dzangu 0735 898 625.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndakarambana nemurume uye ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi ane makore makore 28 — 35 asinawo utachiona hweHIV. Anoda anondibata pa0773 114 935.
Ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba mutsvuku kana mushava ari pachokwadi. Ndine mwana mumwe, anoda imba nhamba dzangu 0733 156 395.
Ini ndiri mukomana ane makore 22 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21. Nhamba dzangu 0771 087 431.
Ndiri kutsvagawo murume anoda kuroora asi varume vevanhu kwete. Ndine makore 21 nemwana mumwe chete, ndiri HIV positive asi handiratidziki. Vanoda ndibatei pa0776 903 037.
Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwna 1 ndinoda murume ane makore 30 – 38 ane mwana 1. Ngaave akashambidzika anoshanda muHurumende. Vane madzimai kwete musafona zvenyu, anoziva rudo andifarira ndinobatika pa0778 097 490.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 4 ndinotsvagawo mukadzi wokuroorana naye ane makore 20 kusvika 32 ane mwana mumwe kana vaviri. Ngaave anoda zvekuvaka musha ari HIV positive asi asingaratidzike. Anonamata nhamba dzangu 0775 357 075.
Ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa nemwana mumwe, ndinogara kuMarondera uye ndiri kutsvagawo murume ane makore 39 zvichidzika ane mwana mumwe chete kana vaviri. Handidi anonwa doro kana kuputa fodya. Vanoda ngavandibate pa0776 595 432.
Ndakazomuwana wekushamwaridzana naye nekudaro vose vachiri kufona pa0774 452 870 chiregerai.
Ndine makore 27 ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Anenge ada anondibata pa0776 192 918.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vaviri ndiri kutsvagawo shamwarirume yepamwoyo iri pakati pemakore 24-30 akasununguka kunoongorwa ropa. Fonai kana kutumira sms pa0772 412 225.
Ndiri murume ane makore 33 nevana 3 ndiri kutsvaka mukadzi ane mwana mumwe akasununguka kunoongororwa ropa. Anoda zvekuvaka musha ngaandibate pa0773 466 454.
Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvaga mukadzi anoda kuroorwa ane makore 20 kusvika 28 kwete anoda kutamba. Vanoda vanondibata pa0713 951 814, ndapota itai zvekufona asi matsotsi kwete. Ndatenda hangu.
Ndiri murume ane makore 32 ndinodawo mukadzi ane makore 19 kusvika 27. Vanoda nezvangu fonai pa0776 326 992.
Vaimbofona pa0783 532 403 chiregai ndakazomuwana murume wandaida.
Ndiri murume ane makore 35 ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 18 — 34. Vanoda ndibatei pa0774 529 553 kana paWhatsApp.
Ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa ndinodawo musikana ane makore 18 asina mwana uye anotya Mwari. Ngaave wemuGweru, nhamba dzangu 0714 571 544 asi macall me back kwete.
Ndiri murume ane makore 50 nevana vatatu, mukuru ava nemudzimai mudiki ari kuita Form 3. Ndinotsvakawo mudzimai ane makore 25 — 45 ane mwana mumwe, vaviri kana uyo akarambwa nekuda kwekushaya mbereko asi achida hake imba asina zvipomerwa zvinosanganisira utachiona hweHIV. Vari pachokwadi ndibatei pa0715 805 924.
Ndiri murume ane makore 35 ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 24 — 30. Ndiri mutyairi wemagonyeti uye ndiri HIV positive. Nhare dzangu 0773 155 443.
Makadini? Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi ane makore 33 zvichidzika akavimbika. Anoda ngaandibate pa0777 299 700.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino hazvina kuita vanhu vaida kutamba neni. Ndiri mukadzi ane makore 45, ndiri HIV positive uye ndinotsvaga murume wekushamwaridzana naye. Anoda ngaandibate pa0773 620 157.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Anodawo zvemba andibate pa0774 949 902.
Makaita basa vose vaifona pa0716 348 074 chiregedzai henyu nekuti zvakaita. VeKwayedza ndichakukokai kumuchato.
Ini ndiri murume ane makore 34 anodawo mukadzi kana musikana ane makore 25 kusvika 33. Handina chirwere, afarira kutaura neni ngaandibate pa0773 214 570 kana paWhatsApp.
Ndinotsvakawo shamwarirume, ndiri mudzimai ane makore 45 asi varume vevanhu nevanotamba kwete. Ndoda munhu akagezeka ane utano nekuti ndiri negative, ngaave nemakore 50 — 70. Nhamba dzangu idzi 0737 376 532.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo musikana kana mukadzi asina murume wekushamwaridzana naye. Ndibatei pa0783 916 220.
Ndiri murume ane makore 43 ndiri kuda mudzimai wekuroora kubva pamakore 30 zvichidzika. Nhamba dzangu 0777 373 867.
Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 23 zvichidzika. Anoda nhare dzangu 0776 790 581.
Ndiri kutsvaga musikana anoda kuroorwa ane makore 18-20 ari pachokwadi, ari HIV negative. Anondifonera pa0779 511 207 kana kundibata paWhatsApp.
Makadii? Ndiri murume ane makore 36 ndinoda mukadzi ari pachokwadi kwete zvekutamba ane makore 20 kusvika 35. Ndinoshanda, anoda ngaandibate pa0773 484 459.
Ndiri mukomana ane makore 25, HIV negative uye ndinodawo mukadzi ane makore 18 kusvika 24 anoshanda muHarare. Ari pachokwadi anondibata pa0779 672 056.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 27 ndinotsvaga murume anoda zvekuroora asiri pamapiritsi. Nhamba dzangu 0771 416 732.
Ini ndiri mukadzi ane vana vaviri, HIV negative uye ndinotsvaga murume wekushamwaridzana naye. Vanoda vanondiwana pa0773 280 070.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinoda kutsvagawo musikana ari pachokwadi anoda zvemba ane makore 20 kusvika 23. Vanoda ngavandibate pa0783 726 484.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 25 —26. Nhare dzangu 0778 374 934.